Zano kune vehunyanzvi - Kudzidziswa kwekuziva
Kubva pane ino peji zvinokwanisika kukumbira kubvunzana kubva kune YekudzidzisaCognitive nyanzvi maererano nekiriniki kesi kana bvunzo dzinotorwa mukuwongorora. Tinokukumbira kuti uzadze fomu rakasungirirwa nekusarudza nyanzvi kuti ubvunze zano uye nekufungidzira muchidimbu nyaya yechikumbiro. Iwe unozobatika nekuwanikwa kwedu kweawa yega yemusangano kuburikidza neSkype kana Zoom. Mutengo wekubvunzana i50 Euro / awa. Huwandu hushoma, kweisingasviki awa rimwe, i50 €.
Nyanzvi yekutaurirana *
Dr. Ivano Anemone - Neuropsychologist (neuropsychological kuongororwa kweanofungidzirwa ASD uye / kana ADHD mukukura uye zera revakuru, kurapwa neuropsychological kweASD uye / kana ADHD uye / kana kushomeka kwekuziva mukukanganisa)
Dr. Chiara Donadio - Speech Therapist (kuongorora uye kurapwa kwemitauro uye matambudziko ekudzidza)
Dr. Enrica Marrocco - Neuropsychologist (manejimendi mukuyera nekugadzirisa kwekuziva uye kwepfungwa-kwehukama kupindira mune hutano uye hwehukweguru kukwegura)
Tsananguro pfupi yenyaya yekubvunzana *